Dacwado la xiriira tayo dhimista taleefoonada iPhones oo loo gudbiyay maxkamadaha Mareykanka - BBC News Somali
Dacwado la xiriira tayo dhimista taleefoonada iPhones oo loo gudbiyay maxkamadaha Mareykanka
23 Disembar 2017
Image caption Taleefoonada ay sameyso shirkadda Apple
Labo gal dacwadeed oo ka dhan ah shirkadda taleefoonada ee Apple ayaa loo gudbiyay maxkamado ku yaala Mareykanka, kadib markii shirakdda Apple ay qiratay inay dhinto tayada taleefoonada iPhones-ka loo yaqaano.
Shirakadda Apple ayaa sheegtay in sababta ay u sameysay arrintani ay tahay si loo xanaaneeyo taleefonka, loogana hortago in baytariga taleefonka uu daciifo.
Dacwadahan oo laga furay maxkamado ku yaala gobolada California iyo Chicago ee dalka Mareykanka ayaa waxaa gudbiyay koox isticmaasha taleefonka iPhones-ka oo matalayay dhamaan macaamiisha kale ee taleefoonadaasi.
Macaamishan ayaa waxaa ay shegeen in qorshaha shirkadda Apple uu saameeyay dhaqaalahooda.
Shirkadda Apple ayaa markii ugu horeysay qiratay arrin muddo laga shakisnaa, taas oo ah in ay dhinto tayada taleefoonada iPhones-ka loo yaqaano marka muddo la heysto.
Arrintan ayaa soo shaac baxday kadib markii qof macaamiisha ka mid ah uu shabakada Reddit kusoo qoray in uu ogaaday in taleefoonkiisa tayadiisa shaqo la dhimay, taana uu ku ogaaday kadib markii uu isticmaalay taleefoon kiisa la jaan ah, balse dadka qaar ayaa sheegay in sababta ay tahay in Apple ay dadka ku dhiirogalinayso in ay iibsadaan jaadadka cusub ee taleefoonada.
Qaar kamid ah macaamiisha Apple waxaa ay shegeen inay haboontahay in shirkadda ay tayo dhimista ku wargeliso macaamiish.